Mashandisiro ekushandisa data hombe kune Bhizinesi Rinokura - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Business, Bhizinesi Njere, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
zvose bhizimisi masangano, madiki kana makuru, anoda ruzivo rwakakosha uye ruzivo. Nezvekunzwisisa zvaunovavarira vatengi uye sarudzo dzevatengi, big data inowana chikamu chakakosha mune yako bhizimisi. Zvinotokukurudzira kuona zvavanoda. Iyo data chaiyo inofanirwa kuunzwa zvinobudirira uye nekuongororwa zvakakodzera. Inogona kugonesa a bhizimisi kambani kuita zvinangwa zvakasiyana.
Big Data hazvinakidzi. Iwe unenge usina kunyatsoziva kuti chii. Iwe haungazove neruzivo rwekuti ungashandise sei Big Data. Asi pfungwa yacho haisi itsva mune bhizimisi nyika. Chokwadi, masangano ari kuramba achiwedzera, madiki nemakuru, ari kuramba achiwedzera uchishandisa hombe data uye yakabatana yekuferefeta nzira senzira yekuwana dhata yekubatsira zvirinani sangano ravo uye kushandira vatengi vavo, vachiwana pundutso kubva kumabhenefiti eiyo big data.
Hedzino nzira nomwe dziri kushandiswa nemasangano big data kubata vatengi sevanhu - uye kugadzira hukama huri nani hwenguva refu kuitira kuti vatengi ivavo vatenge zvakawanda kubva kwavari.
Unoda zvimwe pamusoro Big Data? Tora kopi yako yemahara ipo pano.
1. Kuziva Kudiwa Kwevatengi
Imwe yezvakajeka kushandiswa kweiyo big data ndiko kunzwisisa zvinodiwa nevatengi.
Chinhu chakakosha kurangarira ndechekuti zvisinei nekuti sangano rako harina huwandu hwakawanda hweruzivo rwevatengi, unogona kutora mukana kune mamwe, makuru makuru eruzivo zvakare. "Ruzivo rwakakura". Zvisinei, iwe unogona zvakare kuwana yakawedzera, yakakura-ruzivo ruzivo nezve izvo vatengi mune yako indasitiri kana tarisa nhamba inoda. Zvakare, dzimwe nguva, iwe unogona kugadzikana pane kupenya kwesarudzo kunyangwe pahwaro hwe diki dhata kuunganidzwa.
2. Zvakanakisa Zvakatarwa Nguva
Kutaura nezve nguva, nhasi vashambadziri vanosangana neshungu dzechokwadi nekuremekedza zvemukati. Ndokunge, kupwanya zvakanyanya kubva pane yega yega chidimbu chemukati chakaburitswa chakanyanyisa kurehwa pane kuita.
Rangarira kuti panogara paine zvakawanda zvemukati zvinofamba zvichikomberedza masaiti epamhepo online uye iyo blogosphere kupfuura chero nguva yapfuura. Neraki, iyo analytic inogona kutamba chikamu chakakosha zvine chekuita nenguva uye yekuburitsa zvirimo.
Kuunganidza data kune vanyoreri uye vateveri pakupedzisira kunoratidza vashambadzi nzira yakanakisa yekutaurirana navo, nekudzokorora.
Ichi chikonzero chimwechete chinogona kubatana kune zvakasikwa zvepamhepo network, zvakare. The big data kazhinji inobatsira kuyeuka zvakadzama zvakajeka zvechero yakapihwa system yekusimudzira: hatigone kuve kwese kwese panguva yakatarwa. Nekudaro, nemidziyo iyi, basa rekusimudzira siku nesikati rinoshanduka kuita chokwadi.
3. Sora dhayagiramu yako yemagariro
Yako dhizaini dhizaini - ivo vanhu vaunosangana navo pairi evanhu vezvenhau - isimba rakasimba. Paunenge wakangwara nezvesocial, unogona kunge uine masangano paFacebook uye pamwe, LinkedIn, waunoda kuvaka hukama naye. Pamwe vangangove vatengi, mablogiki, vanoteedzera vanobatika kana mumwe munhu ane simba anogona kuve mukana kune wako bhizimisi.
Ivo vanhu vanopa nguva uye nesimba kugadzira izvo zvemukati. Vazhinji vanozobvuma kana iwe uchibatana nayo, wopa maoni pairi kana kunyange kuigovana. Uyu mukana wekusimbisa hukama.
4. Iva neruzivo rwakadzama
Bata iyo data kunyangwe vatengi vako vachibatana neako saiti / webhu kunyorera kubva pahwendefa /smartphone/ PC, kwavanogara, kunyangwe vachibatana newe kuburikidza evanhu vezvenhau, uye pavanenge vataura mabatiro evatengi. Iyo inoshamisa huwandu hwe data inoita seisina hukama (ndicho chikonzero ichinzi big data), zvakadaro masangano anogona kuchera zvakakodzera izvi kuti ape kubata kwakagadziridzwa.
Natsiridza ruzivo irworwo nekunyorerana nedata rinogara munzvimbo dzakasiyana siyana dzekutengesa data kuti uve nechokwadi chekuti unogona "kusvika pamhedziso iri pachena." Correlate ruzivo irwo panguva chaiyo mumaitiro ako kuti ugone kuwana zvakakwana, nenguva, chaiyo, uye nekubudirira ruzivo.
Kutarisira nenzira kwayo ramangwana, masangano anogona kukwidziridza zvigadzirwa zvakafanira kune vatengi chaivo pane chaiyo chiteshi.
5. Kuwedzera Kwekutengesa
Zvichipihwa legwork uye mutengo unodiwa pakushandisa big data, panofanira kuva nekurudziro yebhajeti yekukwira nayo.Sezvineiwo, iripo.
Tora iyo e-zvokutengeserana bhizimisi, semuenzaniso, uko kunzwisisa kwakadzama maererano nekuongorora kunogona kumiririra nguva yechokwadi a bhizimisi. Nekutevera mapatani uye kutenga nguva dzose, mhando dzinogona, pakupedzisira, kuziva mhando dzinotungamira kune mabhenefiti epamusoro. Big data kuferefeta kunogona kuona zvinodiwa zvestock uye zvakanyanya kuchengetedza iyo bhizimisi kubva pakusashanda. Zvakare, kutarisa kune indasitiri data kunopa mikana kusangano kuti ione kuti ndezvipi zvinhu zviri kudhumhana nevatengi uye chii chakasakara.
Kune vatengesi vanopesvedzera zvibvumirano zvedhijitari kunyangwe zvidiki zvidiki zvinoburitswa nekuongorora zvinogona kuunza zvakakosha pundutso kana nhamo. Zvakare, iyo data yakaunganidzwa ne big data kazhinji zvinotaridza kuti vatengesi vakati wandei havazofungidzire kusvika vaona pavangazokanganisa.
6. Dziviriro yedata
Big Data nzira dzinoita kuti iwe ugone kutsanangura yakazara ruzivo chiitiko chesangano. Izvi zvinokutendera kuti uongorore huwandu hwakawanda hwematambudziko emukati. Neiyi data, unogona kuchengetedza iyo yakapfava data. Inosimbiswa nenzira yakakodzera uye inoiswa kure sezvinodiwa zvekutonga.
Nekuda kweizvi, mabhizinesi mazhinji anga achitarisa Big Data kuvimbisa kuchengetedzwa kwemashoko uye inishuwarenzi. Zvinonyanya kukosha mumakambani anotengesa nedata remari, dhibhiti uye kadhi rechikwereti, uye mamwe maitiro akafanana.
7. Kumhanyisa Nguva-ku-Mhinduro
Vakapindura vakapa zvikonzero zvakasiyana-siyana shure kwezvido zvavo mukati Big Data, kubva mukuderedza kutyisidzira kusvika pakugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Chero zvazvingava, zvikonzero zviviri zvaive mapiyona akajeka: kuita chokwadi-kwakavakirwa, kuita sarudzo kuri nani uye kusimudzira ruzivo rwemutengi. Zviripachena, idzi ndidzowo tsananguro huru dziri seri kwezvido mutsika Business Insight (BI) analytics.
Nekushandisa new Big Data zvigadzirwa, makambani anogona kupindura mibvunzo mumasekondi zvichipesana nemazuva uye nemazuva panzvimbo pemwedzi. Izvi zvinomutsa, nekudaro, zvinoita kuti masangano apindure mibvunzo inopikisa kuongororwa, kugadzira bvunzo uye kudzidza mapatani anokurumidza kuchinjika kumusika nekugadzirisa mashandiro akaoma ebasa.
The big data ndizvo zviri kukurukurwa nemunhu wese.
Big Data inokurudzira mabhizinesi kuita mikana mitsva yebudiriro uye zvikamu zvitsva zvizere zvemasangano anogona kujoinha nekuparadzanisa ruzivo rweindasitiri. Aya masangano ane data rakakwana nezve vatengesi nevatengi, zvigadzirwa nemasevhisi, maitiro evatengi anogona kuwanikwa nekuongororwa. Inonzwisisawo uye inovandudza bhizimisi miitiro.
Zvingangoitika zvakadaro Big Data icharamba ichitamba chikamu chakakosha mumabhizinesi akasiyana siyana pasi rose. Inogona kuita minana kuna Jehovha bhizimisi mabhizinesi. Iva nechokwadi chekunyatsofunga kuti zvii zvaunoda. Nechinangwa chekupedzisira chekugamuchira mibairo yakawanda, zvakakosha kugadzirira vamiririri vako pa Big Data zano. Nekutonga kuri pamutemo kwe Big Data matekiniki, yako bhizimisi zvichava zvinobatsira uye zvinobudirira.
Une chirongwa pa Big Data kuvandudzwa? Svika pedyo kana kuti tsvaga rubatsiro.